कस्तो बन्दैछ स्थानीय सरकारको बजेट ? – मिथिला दैनिक
कस्तो बन्दैछ स्थानीय सरकारको बजेट ?
मिथिला दैनिक २४ जेष्ठ २०७७, शनिबार १२:२८
काठमाडौं । संघीय सरकारको बजेट सार्वजनिक भएसँगै सोही आधारमा प्रदेश र स्थानीय तह बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार प्रदेशले १ असार र स्थानीय तहले १० असारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याउनुपर्छ ।
कोरोनाको चिनियाँ खोप यसै वर्षको अन्त्यसम्म बजारमा आउनसक्ने, सकियो दुई चरणको परीक्षण